Tuhmane 80-jir ah ayaa weeraray ku qaaday masjid ku yaal Bayonne
By AxadleTM On Oct 29, 2019 Last updated Oct 29, 2019
Nin 84 jir ah ayaa weeraray Masaajid ku yaalla Dalka France waxaana uu dhaawacay labo qof oo da’ ah.
Nin hore u ahaa murashaxa xisbiga Xag jirka ah ee National Front ee 80-jir ah ayaa bilaysku wax ka waydinaayan kadib toogasho lagu weraaray masjid ku yaal magaladda Bayonne dalka faransiiska, halkaas oo lagu dhaawacay laba qof oo waayeel ah oo cibaadaysanaya.
Ninkan ayaa isku dayay in uu Masaajidka dab qabadsiiyo,waxaana la kulmay labada qof ee Masaajidka banaankiisa joogay,markii ay isku dayeen in ay hor istaagaan ayuu rasaas la dhacay halkaas ayeyna ku dhaawacmeen.
Booliska France ayaa Ninkan ka qabtay banaanka gurigiisa,waxaana intii uusan Masaajidka ka tegin uu dab qabadsiiyay gaari yaallay Masaajidka banaankiisa.
Dhibbnayaasha llabada ah ayaa da’dooda lagu kala sheegay 74 jir iyo 78,waxaana la dhigay Isbitaal ku yaalla degaanka Bayonne, halkaas oo lagu daweynayo.
Booliska France ayaa warbixin ay soo saareen ku sheegay magaca Ninka Claude Sinke, oo 84 jir ah, ma cadda sababta ku kalliftay in uu weerarkaas geysto.
Wasiirka arrimaha gudaha France Christophe Castaner, ayaa xaqiijiyay xarigga Ninkaas waxana uu cambaareeyay falka uu ku kacay.
Haweeneyda xoggaamisa Xisbiga midigta fog ee Muslim nacaybka ku badanyahay Ninka weerarka geystayna lala xiriiriyay Marine Le Pen, ayaa qudheeda cambaareysay weerarkaas.
Weerarku wuxuu dhacay galabnimadii Isniinta. “15h30, nin ayaa isku dayay inuu dab qabadsiiyo albaabka masjidka magaladda Bayonne; ninka falka geystey wuxuu toogtay laba qof oo isku dayey iney ka hor istaagan falka” ayaa lagu yiri warbixin ka soo baxday xafiiska Pyrenees Atlantique.